K (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၈
ကဗျာဆရာ ညွှန့်သစ်ရဲ့၇၆နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ကို သူနေထိုင်ရာ ရန်ကုန် ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ၁၀ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်လမ်း၊ အမှတ်(၁၂၈၈)မှာ နိုဝင်ဘာ ၂၄ရက် ယနေ့မနက်ပိုင်းမှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ကဗျာဆရာ ညွှန့်သစ်ရဲ့၇၆နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ပွဲကို ကဗျာဆရာညွှန့်သစ် ချစ်ခင်သူများ၊ စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကဗျာဆရာ ညွှန့်သစ်ဟာ မိုးဝေခေတ်ကဗျာဆရာတဦးဖြစ်ပြီး သခွပ်နီ၊ အုန်းမြင့်လှိုင်၊ ခင်ဝမ်းအစရှိတဲ့ကဗျာဆရာကြီးများရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တဦး ဖြစ်ပါတယ်။
ကဗျာဆရာ ညွှန့်သစ် ကိုယ်ရေးအကျဉ်း အမည်ရင်း- ဦးစိုးညွှန့် ၁၉၄၂၊ နိုဝင်ဘာ ၂၄ရက်ဖွား ဧရာဝတီတိုင်းဇကာကြီးရွာတွင်အဖ- ဦးအုန်းမောင်၊ အမိဒေါ်ညိုတို့မှ မွေးဖွားခဲ့။ မွေးချင်းညီအကို သုံးယောက်အနက် ဒုတိယသားဖြစ်။ ၁၉၅၀ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေချိန် ရန်ကုန်ရောက် ရန်ကုန်ခရိုင်လုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ပထမဆုံးကဗျာစာမူ- ၁၉၇၁၊ မိုးဝေမဂ္ဂဇင်းမှာ ဒါပါပဲ ကဗျာဖြစ် စုပေါင်းကဗျာစာအုပ်များတွင်လည်း ပါဝင်ရေးသားခဲ့ တကိုယ်တော်အနေနဲ့ ခါးသက်တဲ့အရသာ(၁၉၉၄)၊ ကောင်း ကင်ပင်လယ် (၂၀၀၄)အင်္ဂလိပ်-မြန်မာနှစ်ဘာသာ (သားဂျာနယ်ကျော် မိုးဟိန်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆို) လုံးချင်းကဗျာစာအုပ် ၂အုပ်ထုတ်ဝေထား။ သြဂုတ်လအတွင်းက လေ ဖြတ်ဝေဒနာကြောင့် ဆေးရုံတက် ကုသခဲ့ရ။ မကြာသေးမီက ကဗျာဆရာများနှင့် စကားစမြည်စာအုပ် ထွက်ရှိ။
ဇနီး- ဒေါ်မြမြသန်း (ကွယ်လွန်) သား ၃ ဦးရှိ ရန်ကုန်တိုင်း ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ၁၀ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်လမ်း၊ အမှတ်(၁၂၈၈)တွင် နေထိုင်ရင်း ကဗျာ၊ ဆောင်းပါးများရေးသားလျက်ရှိ
၁၉၇၃ခုနှစ်က သူရေးသားခဲ့တဲ့ ဟင်းလင်းပြင်များ ကဗျာဖြင့် ၇၆ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကို ဂုဏ်ပြုလိုက်ရပါတယ်။
လွတ်လပ်ပါပေစွ အို. . . ကောင်းကင်။
ရင်တွင်းခံစားနိုင်ပါပြီ. . . ။
K Local News Headlines Nyunt Thit